I-5 ephezulu ye-STP Brokers ngoJanuwari 2022 | Iinkonzo kunye neNgxowa-mali ayityhilwanga
I-5 ephezulu ye-STP Brokers ye-2021
Ukuba uqhelene nembonakalo ye-forex, uya kwazi ukuba zintathu iintlobo eziphambili zabarhwebi ezisetyenziswa ngabarhwebi ukufikelela kwimarike. Aba ngabarhwebi be-STP, abarhwebi be-ECN kunye nabarhwebi bemakethi.
Siphila kwihlabathi apho sifuna ukuba izinto zenziwe ngokukhawuleza nangempumelelo ngokuzanelisa kwangoko. Ngale nto engqondweni, sinabathengisi be-STP. Ngokubalulekileyo, oku kungenxa yokuba abathengisi be-forex bafuna iiodolo zabo zentengiso ezenziweyo kwangoko.
Beka kumagama alula - Abarhwebi be-STP basebenza njengomntu ophakathi phakathi kwakho njengomrhwebi kunye neemarike zangaphambili. Oku kuyenzeka kude nobukho bedesika yokurhweba, eya kuthi ngokwesiko inxulunyaniswe nabathengisi be forex kunye neemarike. Emva koko uneeodolo ezinokucutshungulwa ngoko nangoko, kunye nokukunika indlela ethe ngqo yokubonelela ngemali.
Nangona kunjalo, kunye nabarhwebi abaninzi basebenza njengababoneleli be-STP kule mihla, kunokuba nzima ukwazi ukuba ungaqala phi.
Kananjalo, ukukunceda ufumane ezona STP broker zibalaseleyo ze2021- iqela lethu leengcali libeke ndawonye isikhokelo. Oku kugubungela iziseko zeqonga le-STP, ezinye iingcebiso eziluncedo malunga nokuba ujonge ntoni, kwaye ke- 5 yeyona nto ibalaseleyo kubarhwebi be STP ekufuneka uyiqwalasele.
Zintoni ii-STP Brokers?
I-STP sisichazi 'sokuQhubeka ngokuSebenza'. Yayiqale yadalwa eLondon malunga neminyaka engama-30 eyadlulayo, apho yayisetyenziselwa urhwebo ngokulingana. Ngaphandle kwako nakuphi na ukuphazamiseka okwenziwa ngesandla - njengoko i-STP ikwi-elektroniki ngokupheleleyo, abarhwebi abanjalo basebenzisa itekhnoloji ephumeza inkqubo yentlawulo ezenzekelayo. Oku kubizwa ngokuba yi-STP kwaye kudala ukurhweba ngokukhawuleza okukhulu kubarhwebi.
Ngokubanzi ngokubanzi kuthathwa njengokusebenza ngakumbi kunenkqubo yokuhlawula yesiqhelo, iinkonzo ezininzi zezemali ezinje 'ngokulungiswa kwentlawulo' ngoku zisebenzisa le nkqubo rhoqo. Njengoko besitshilo, icala ledesika yokujongana nezinto alifuneki kwaphela kule broker ye STP.
Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba endaweni yokujongana nedesika yokurhweba, umthengisi we-STP uya kudlulisa ii-odolo zakho kubanikezeli bemali-mboleko (ngaphandle kokuphambuka). Ababoneleli bamatyala ngokuyintloko bangumntu ophakathi ngokwabo kwiimarike zokhuseleko. La maziko emali angayintoni na ukusuka kwimibutho yotyalomali ukuya kwihedge fund nakwiibhanki.
Basebenza njani abarhwebi be STP?
Ababoneleli bamatyala banokufikelela ngokupheleleyo kwimakethi yeebhanki eziphakathi. Abona bathengisi babalaseleyo be-STP bathambekele ekubeni nabanikezeli beenkxaso mali ezingenakubalwa echibini labo, kwaye ngamnye uya kucaphula ixabiso lokucela ibhidi.
Masithi umthengisi wakho we-STP unabantu ababonelela ngothengisa ezintandathu.
Baza kubona izibini ezithandathu ezenzelwe ukubiza ixabiso, enye kumboneleli ngamnye.
Xa kuziwa ekucwangciseni ezi ntelekelelo zabanikezeli bemali, inkqubo ye-STP yokurhweba iya kulungiselela ngokuzenzekelayo iikowuteshini zokubuza ibhidi ngolona hlobo lubalaseleyo kokubi kwaye yongeza intlawulo encinci kwisilinganiso ngasinye.
Le 'pip' yongezwa kwikoteyishini nganye yomnikezeli wemali kulindeleke ukuba ikhomishini yomrhwebi yokufumana iikowuti kunye notyalomali lwakho. Nje ukuba ubeke iodolo yakho ukuba uthenge inani elithile lesibini semali, umthengisi wakho uza kuthumela iodolo kumboneleli wemali.
Xa i-odolo yamkelwe, umniki-mali uza kubona iikowuti zoqobo lwazo. Okwangoku, umrhwebi ugcina umbhobho oshiyekileyo njengenzuzo.
Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa ii-STP Brokers?
Esinye sezibonelelo eziphambili ezithi gqi engqondweni kukuba ii-STP broker aziyi kukuthobela ukuba uphinde ucaphule iikowuti. Oku kuhle, kuba zihlala zinokonakalisa kwimisebenzi yakho yorhwebo. Uyakufumanisa ukuba ngokungafaniyo nezinye iintlobo zabarhwebi, azikho ukulibaziseka okungafunekiyo. I-STP iyafumaneka ngokubulela kwinkqubela phambili ye-FIX (Financial Information Exchange) protocol.
Izinto ezisisiseko ze-STP kukwenza ukuba amaxesha okuphunyezwa komyalelo amafutshane. Oku kukhokelela kunciphiso lokutyibilika kunye nokuphinda ucaphule, kwaye yenza ukuba ube nokufikelela kumaxabiso afanelekileyo. Abarhwebi be-STP banokuthathwa njengothe ngqo ngakumbi, ngenxa yokunqongophala kwembambano yomdla njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Ukusika isidingo songenelelo ngomrhwebi kuthetha ukuba umboneleli uyakwazi ukwenza inzuzo kwi sasaza Intlawulo kurhwebo ngalunye. Oku kuthetha ukuba omabini amaqela afumana urhwebo oluthembekileyo nolungileyo. Ngenxa yokuba itekhnoloji isebenzisa isantya esinjalo xa uhlela iikowuti, umthengisi we-STP uyakwazi ukubonelela kwaye agcwalise iiodolo zakho ngexabiso elifanelekileyo.
Xa ujonga ukusasazeka kwe-STP, zihlala zithathwa njengezinokuguquguquka. Oku kungenxa yokutshintsha rhoqo kwexabiso-lokubuza amaxabiso athathwe kwiindidi zeekowuti (ezinikezelwa ngababoneleli bemali). Ngale nto ithethwayo, ukusasazeka ngokubanzi kukhuphisana kakhulu, ngakumbi xa kuthelekiswa nabenzi bemarike.
STP Brokers vs Abenzi beNtengiso
Sicinga ukuba kubalulekile kuwe ukuba ube nokuqonda okusisiseko kweentlobo ezininzi zeentengiso kunye neekowuti ngaphambi kokuba ungene ngaphakathi kwaye ukhethe umrhwebi. I-STP kunye nabenzi bemakethi bathathelwa ingqalelo njengezona ndlela zimbini zisetyenziswa ngokubanzi kwiimodeli zeshishini labarhwebi. Ukufikelela kwinkqubo yabenzi beemarike basebenzise ukucaphula amaxabiso kunokukunceda ukuba uqonde ubungakanani bee-STP broker.
Umenzi wentengiso uhlala ebizwa ngokuba yidesika yokuthengisa. Ngokungafaniyo nabarhwebi be-STP, abenzi bemarike banikezela ngexabiso lokucela ibhidi endaweni yokuya kumboneleli wemali. Oku kuthetha ukuba ikowuteshini ilingisa ixabiso lentengiso.
Abarhwebi bemakethi abayifaki indawo yabathengi kunye nabanye ababoneleli ngeempahla. Baseta amaxabiso-okubuza amaxabiso ngenkqubo yabo. Abatyalomali banokuvula kwaye bavale izikhundla emva kokujonga amaxabiso kwiqonga lomenzi wentengiso.
Ngenxa yokungabikho kwemali yokuhlawula umngcipheko, abathengisi bezentengiso ngamanye amaxesha bayazishiya izikhundla ezinkulu. Ngokuchasene nabarhwebi be-STP, ukusasazeka ngokubanzi kubanzi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ii-slippages kunye neekowuti eziphindaphindwayo zihlala ziqhelekile kubenzi beemarike.
Uninzi lwabarhwebi lubonelela ngeemakethi kunye neenkonzo ze-STP ukuze ukwazi ukuziqhelanisa noxhomekeke kwiimfuno zakho. Olu lwazi luya kufumaneka kwiwebhusayithi yomthengisi.
Kutheni ndifanele ndirhwebe nge-STP Broker?
Beka ngokulula - ukuba umtsha kurhwebo, uya kuxhamla kwiqonga le-STP. Kungenxa yokuba uyamthintela umenzi wentengiso ukubeka amaxabiso phezulu - ihlala ingemva kwesibhengezo seendaba esikhulu semali (kulapho iiodolo zinokukhatywa khona).
Nangona kunjalo, zininzi ezinye izibonelelo zokusebenzisa i-STP broker-esixoxa ngayo ngeenkcukacha ezingezantsi.
UMboneleli woTywala uyahluka
Ngamafutshane, abathengisi abaphambili be-STP bakunika njengomrhwebi ohlukeneyo wabanikezeli bemali. Ngobungqongqo, iikowuti zazo zonke zidityaniswe kunye ukuthelekisa.
Abarhwebi be-STP bayakwazi ukwenza ulwahlulo olubanzi kakhulu lweemarike ezifumanekayo kuwe ikakhulu kuba inkqubo iqokelela amaxabiso kubanikezeli bolwelo abaninzi ngaxeshanye. Oku, ewe, kuthetha ukuba uza kuba nokufikelela kumaxabiso okhuphiswano ngakumbi.
I-DMA (Ukufikelela ngqo kwiNtengiso)
Uninzi lwabarhwebi be-STP babonelela ngokuFikelela kwiNtengiso ngqo-okanye i-DMA ngokulula. Le yinto i-ECN brokers kunye ne-STP brokers efanayo. Nangona kunjalo, ngelixa amaqonga e-ECN ehlala enikezela nge-DMA, abanye abathengisi be-STP abayenzi. Ngenxa yoko, soloko ujonga oku ngaphambi kokuba ubhalise.
Nangona kunjalo, umthetho olandelwayo we-DMA uqhagamshela njengomrhwebi kwintengiso ukuze ukwazi ukufaka iiodolo kubaboneleli bemali. Konke oku kwenziwa 'ngokuphunyezwa korhwebo ngombane'.
Ezinye izinto eziqhelekileyo ze-DMA zibandakanya:
Amaxabiso amanani mahlanu
Ukufikelela kwiincwadi zentengiso
Ukuphunyezwa kweemarike kuphela
Ukuphumeza elubala okungcono
Kunokuthiwa abathengisi be-STP abaswele i-DMA basenokungabonakali. Kungenxa yokuba ii-odolo ziya kugcwaliswa ngumrhwebi wakho emva koko zikhuselwe ngababoneleli bemveliso, ngendlela yokubiyela.
Ii-asethi ezahlukeneyo ziyafumaneka
Kukho iindidi zee-asethi ezahlukeneyo onokuzifumana nge-STP broker yakho. Iiasethi ezixhaswayo ezikhoyo zihlala zezi zilandelayo:
Njengoko i-STP broker ivumela bobabini umboneleli wemali kunye nawe njengomrhwebi ukudibanisa, inqanaba eliphezulu lokungabonakali liyafuneka kuzo zombini. Ukubeka ngokulula, ngokurhweba nomthengisi we-STP - akukho mntu uza kwazi ukuba ungubani. Uya kuba ungaziwa ngokupheleleyo, kwaye urhwebo luyenziwa kwiimeko zokwenyani zentengiso, kunye namaxabiso angakhethi cala.
Oku kunokuba kuhle kakhulu kubaqhekezi, umzekelo. Kungenxa yokuba akukho mfuneko yokuba bakhathazeke malunga nokutyibilika okanye ukucaphula iikowuti kwakhona - singasathethi ke ngamaxabiso angcono ebhanki kunye nokufikelela kubutyebi obungaphezulu.
Ukurhweba nge-STP kuthetha ukungafihli nto
Abarhwebi be-STP bahlala baziwa phakathi kwabarhwebi ngenxa yokuba bahlala bengathathi cala ngalo lonke ixesha. Le meko kunjalo nokuba uyayenza okanye awuyenzi inzuzo. Okwangoku, uyazi ukuba ukwenza urhwebo nge-STP broker akubandakanyi idesika yokuthengisa (umenzi wentengiso). Ke, oku kuthetha ukuba uyakube ungena kurhwebo lokwenyani kunalowo umenzi wentengiso 'ayenzileyo' esebenzisa eyabo inkqubo.
Abathengisi abaninzi bakholelwa ukuba oku kwenza ukuba abathengisi be-STP bacace ngakumbi kwaye bathembeke. Uyakwazi ukufikelela ekugcwaliseni okungcono kwaye ngokukhawuleza usebenzisa olu hlobo lomthengisi.
Kwabo abangaziyo, ukuzaliswa ngokuyimfuneko ngumyalelo owenziweyo.
Umzekelo, ubeka iodolo yokuthenga isitokhwe kwi- $ 100 kwaye umthengisi uyavuma.
Umthengisi ugqibezela ukuthengisa kwaye iodolo 'iyazalisa'.
I- £ 100 yaziwa njengokugcwalisa, kungenjalo ibizwa ngokuba lixabiso lokwenza iodolo.
Zonke iiodolo zenziwa ngokuzenzekelayo kuthungelwano, kwaye zonke ngokungaziwayo.
Akukho ziphinda zicatshulwa
Ngenxa echibini labanikezeli bemali, umthengisi wakho we-STP uza kukunika elona xabiso lisasazekayo kunye nokusasazeka kwazo zonke iindlela onokukhetha kuzo kumthengisi wakho. Into emnandi malunga nokufikelela kwezi zicaphulo kukuba awuyi kujongana nazo naziphi na iikowuti.
Kwiimeko eziqhelekileyo, xa enye yee-odolo zakho zorhwebo zenqatshelwe ngenxa yotshintsho kwixabiso leasethi, uya kubethelwa ngesicatshulwa kwakhona. Xa ungathengisi nge-STP broker, iqonga elifanelekileyo kuya kufuneka liphinde licaphule i-asethi (eyaqala ukufumana ukutshintsha kwexabiso).
Ekugqibeleni, iikowuti kwakhona zinokuba yingozi kwimpumelelo yakho yorhwebo ekuhambeni kwexesha, kuba kunqabile ukuba isebenzele wena!
Abathengisi be-STP soze baRhwebe nabaThengi babo
Ngokungafaniyo nabarhwebi bemakethi; akukho kungqubana kwemidla nabarhwebi be STP. Endaweni yokwenza imali ngelahleko yabathengi babo, ii-STP broker azisokuze zithathe indawo eyahlukileyo. Ukuba benze njalo, baya kuba nakho ukuxhamla kusilelo lwakho kwaye benze inzuzo ngaloo ndlela.
Abarhwebi be-STP benza nje inzuzo ngokubiza umrhumo wekhomishini ephantsi kurhwebo ngalunye (olubizwa nangokuthi luphawu), endaweni yokuchasa wena ukugubungela umva wabo.
Ukuqwalaselwa xa ukhetha i-STP Broker
Thina kwi-2 Trade yorhwebo sicinga ukuba enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ucinge ngazo xa ufumana umrhwebi olungileyo kukuqinisekisa ukuba zilawulwa. Ewe, yindawo elungileyo ukuqala ubuncinci. Ngokwenza njalo, unokuqiniseka ukuba imali yakho yorhwebo ikhuselekile.
Xa usenza isigqibo ngeyona STP broker ilungele wena, ikwayinto entle ukukhetha enye yezona ndawo zisasazekayo. Kungenxa yokuba kunokwenzeka kakhulu ukuba bakhethe elona xabiso libalaseleyo lokubhida kwenye, kwaye eyona nto ibalulekileyo ibuza sasaza Ukusuka komnye (bonke ngaphakathi echibini labo lokubonelela ngemali).
Kukho ezinye izinto ezimbalwa esicinga ukuba kufanele ukuba uzithathele ingqalelo ekukhangelo lwakho lwezona zinto zibalaseleyo ze-STP broker-esixoxa ngazo apha ngezantsi.
Ilayisenisi yeNqanaba elinye
Njengoko besitshilo, sicebisa ukuba ukhethe i-STP broker enelayisensi epheleleyo kwaye ilawulwa. Nangona kunjalo, sikwacinga ukuba kuya kufuneka uhambe inyathelo elinye ngokuqinisekisa ukuba iphepha-mvume elifanelekileyo likhutshiwe ngumbutho omnye.
Oku kubandakanya ukuthandwa koku kulandelayo:
ICySEC - iSipro
ASIC - Ostreliya
Abona bathengisi babalaseleyo be-STP balawulwa ngamalungu aliqela elinye. Uya kufumanisa ukuba abathengisi abathembekileyo bahlala becinga ngokuza nezinto ezintsha kunye neziphuculweyo zenkxaso yakho kunye nolonwabo njengomrhwebi.
Ekugqibeleni, abarhwebi abalawulwayo banerekhodi enkulu yokuqina kunye nokuzinza kwimarike Forex. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa unokuqiniseka ukuba imali yakho yahlulwe yaze yagqunywa yi-inshurensi.
Ngaba iiNgxowa-mali zaBathengi zahlulwe?
Njengoko sele sichukumisile apha ngasentla, ukwahlulwa kwemali kusetyenziswa ziinkampani ezininzi ezahlukeneyo kwaye umgaqo uhlala ufana. Ukubeka ngokulula, inkampani igcina imali yakho ngokwahlukeneyo iyeyayo ukukhusela imali yakho.
Njengomthengi, kubalulekile ukwazi ukuba ukuba inkampani iye yaya kungena njengongenamali, imali yakho yokurhweba ayizukuthathwa njengenxalenye yetyala labo. Isizathu soku kukuba kuxhomekeke kwinqanaba lokhuselo lwengxowa mali olunikezelwa yi-STP broker yakho, iimali zakho ziya kwahlulwa kuleyo yenkampani, kunye ne-inshurensi epheleleyo.
Umzekelo, ukuba unokhuseleko olukhulu lwengxowa-mali, iimali zakho zihlala zigcinwa zikhuselekile ngumntu wesithathu. Ke, kwimeko elusizi yokuntywila komthengisi, kukho uxanduva olusemthethweni kwiziko lesithathu lokuba imali yakho ibuyiselwe kuwe.
Imirhumo kunye neKhomishini
Xa kuziwa kwimirhumo nakwiikhomishini, ukungafihli nto kubaluleke kakhulu. Abathengisi abaphambili be-STP baya kukunika iikhomishini ezikhuphisanayo kunye neefizi xa urhweba nabo. Eyona nto intle kukuba uninzi lwabathengi be-STP abayi kukuhlawulisa nepeni ngokufaka kunye nokurhoxisa imali. Ewe kuya kufuneka ujonge kumthengisi wakho ukuba ngaba kunjalo na kubo.
Kuyakubakho, nangona kunjalo, kuhlala kukho umaki omncinci kurhwebo ngalunye, kwaye oku kuya kwahluka kubarhwebi kubarhwebi. Le yindlela umrhwebi we STP aza kuyenza ngayo imali. Kufuneka ube nenani elikhulu lokuthengisa kunye ne-STP broker.
Kananjalo, soloko ujonga imigaqo kunye neemeko kwindawo yomrhwebi ukuze ubone ukuba zeziphi iikhomishini kunye nemirhumo onokuyilindela xa uneakhawunti nabo. Ngale ndlela, uya kuthintela nakuphi na ukumangaliswa okungathandekiyo kamva ezantsi emgceni.
Abona bathengisi babalaseleyo be-STP baya kuba neqela elimangalisayo lenkonzo yabathengi elilungele ukukuxhasa nanini na xa ufuna. Sifumanisa ukuba ii-STP broker ezaziwa kakhulu zihlala zineendlela zokuxoxa ngokuhlala kwiqonga labo kunye nenkxaso ye-24/7 yokuqalisa.
Emva kwayo yonke loo nto, xa kufikwa kumba wokujongana neeasethi zemali, ufuna inethiwekhi yenkxaso emangazayo ukukunceda nanini na ungayidinga. Ukuba nomthombo olungileyo wonxibelelwano kunye nenkxaso ekhoyo kuwe ibaluleke kakhulu xa kusiziwa ekufumaneni umrhwebi olungileyo.
Ezininzi iindlela zonxibelelwano ezikhoyo kuwe ngcono. Nangona kunjalo, akukho babini be-STP broker bayafanayo, ke soloko wenza umsebenzi wakho wasekhaya ukuze wazi ukuba loluphi uhlobo lweqonga oza kujongana nalo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo apho unako ukubeka imali kwi-akhawunti yakho ye-STP yomthengisi. Iqonga ngalinye le-STP broker liya kwahluka kancinci malunga noku.
Okona kuninzi, i-STP broker ibonelela ngesixa esikhulu sendlela eyamkelweyo yokuhlawula, kunye nabambalwa abarhanelwa njengesiqhelo. Nazi iindlela zokuhlawula eziqhelekileyo ezixhaswayo:
Amakhadi etyala kunye neDebit
Ikhadi elihlawulelwe kwangaphambili
Kwakhona, kuya kufuneka uyijonge le nto ngaphambi kokuba ungene kwi-broker entsha.
Izixhobo zoMrhwebi kunye nezixhobo
Abathengisi abaphambili be-STP baya kwenza izixhobo ezahlukeneyo kunye nezixhobo zokurhweba ezikhoyo kuwe kwiqonga labo.
Ziya kuba zezi zilandelayo:
Izixhobo zolawulo lomngcipheko
Iindaba zeemarike zezemali
Sicinga ukuba izixhobo ezingaphezulu ezinokubonelelwa ngumthengisi we-STP, kokukhona amava akho okurhweba aya kuba ngcono.
Izikhombisi zobuchwephesha ziyindlela elungileyo yokufunda ukuhamba kwexabiso kunye neendlela ezihamba ngayo.
Nazi ezinye zezona ziqhelekileyo zibonwa kumaqonga e-STP broker:
I-SAR (Ukuma ngokuBuyela umva kunye nokuGuqulwa)
I-ADX (Umndilili weeNkcazo eziMiselweyo)
I-Index of Strength Index (RSI)
Ichimoku Kinko Hyo (ekwabizwa ngokuba yi-Ichimoku Cloud)
Yeyiphi imingxunya yokuSebenzisa i-STP Broker?
Ngokwenyani, apho kukho ubuchule, kuhlala kukho iingozi ezimbalwa, nazo. Kananjalo, kufanelekile ukuba sikwazise ngezinye zezinto ezinokubakho xa ukhetha ukuvula iakhawunti kunye nomthengisi we STP.
Njengoko unokuba sele uyazi, into encinci yiyunithi yewaka lemali esisiseko (imali ekhohlo kwesibini). Ngokubalulekileyo, abathengisi be-STP abajongani neqashiso.
Ngamaxesha athile, abathathi-nxaxheba babambe isikhundla se-0.1 lot (iiyunithi zemali ezingama-10,000). Oku kuthetha ukuba ukuba ufuna ukuvula indawo kwi-lot lot ye-0.01 (iiyunithi zemali eziyi-1,000 XNUMX) -awungekhe, kuba incinci kakhulu.
Ababoneleli bamatyala banokuba neendleko zenkonzo kunye neemfuno. Ngenxa yoko, ngaphandle kokufikelela kumashishini amancinci, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka wenze uphando lwakho ukuze ufumanise ukuba loluphi uhlobo lomthengisi olufanela isitayile sakho sokurhweba kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Kwiphepha le-flip-nokuba unayo ibhajethi encinci kwaye awufuni ukuvula izikhundla ezinkulu, umthengisi we-STP usenokuba luhlobo olufanelekileyo lomthengisi kuwe.
Ngexesha lamanqanaba aguquguqukayo kwimarike yezemali, ukusasazeka kunokubanzi kakhulu. Ke ngoko unokuqaphela ukuba ukusasazeka kubathengi be-STP kunokuba kungahambelani.
Njengoko besichukumisile ngaphambili, nabona bathengisi babalaseleyo be-STP ngamanye amaxesha banokuqwalaselwa njengeendleko. Oku kungenxa yokuba iikhomishini zihlawuliswa ngokomyalelo ngamnye worhwebo. Kulabo abangaziyo, ezi ziboniswa njenge iipipi (cacisa ipesenti).
Abanye abathengisi bahlawulisa amanqaku eepips kwilotho nganye. Oku kuyakongezwa ngokubanzi ekusasazeni abathengi ukuba babone, kodwa ngamanye amaxesha kuya kuba luphawu olungabonakaliyo ukuya kuthi ga nina.
Emngciphekweni wokuziphinda, kubalulekile ukuba sihlale sijonga loo miqathango kunye neemeko. Emva kwayo yonke loo nto, awusoze wenze iakhawunti entsha ye-STP broker ngaphambi kokuba wazi ukuba kuzakubiza malini ukuthengisa.
Ukubhalisa nge-STP Broker-Isikhokelo esenziwa njani
Okwangoku kwisikhokelo sethu, kuya kufuneka ube nokuqonda okukhulu ngendima ye-STP broker kurhwebo lwe-forex, kunye nendlela yokufumana iqonga elilungileyo.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba ibhola iqengqeleke, kufuneka uqale uthathe isigqibo sokuba yeyiphi i-STP broker eza kulungela iimfuno zakho. Kuhlala kucetyiswa ukuba wenze uphando lwakho ngaphambi kokuba uzibophelele ngokupheleleyo.
Abarhwebi be Forex abathengisayo 2019 I-3 ephezulu ye-Ecn ethembekileyo kunye ne-Stp ye-Forex Broker kwi-Market ye-Forex Broker - i-Forex Brokers
Nangona kunjalo, apha ngezantsi uza kufumana amanyathelo alula ukuze uqalise xa kufikwa ekubhaliseni
Inyathelo lokuqala-Fumana i-STP Broker
Ngaba awuqinisekanga ukuba yeyiphi i-STP broker efanelekileyo kuwe? Musa ukoyika, iqela lethu elizinikeleyo liye laqulunqa uluhlu lwee-STP brokers ezilungileyo ze2021.
Sicinga ukuba abarhwebi esidwelise kubo bonke bangaphezulu komdlalo wabo, kwaye ngokuqinisekileyo bafanele ixesha lakho kunye nokuqwalaselwa. Uya kufumana amaqonga ethu aqinisekisiweyo ngaphambili kweli phepha.
Inyathelo lesibini -Iakhawunti yoMthengisi oVulekileyo
Ke, ucinga ukuba ufumene i-STP broker oyithandayo, ngoku lixesha lokuba ubhalise. Njengomgaqo oqhelekileyo kuye nawuphi na umrhwebi, kuya kufuneka ugcwalise ifom elula.
Ulwazi ngokubanzi olufunekayo lulandelayo:
Iinkcukacha zoqhakamshelo; Ngokwesiqhelo inombolo yomnxeba nedilesi ye-imeyile.
Naluphi na ulwazi lwezemali olufunekayo; ezifana nengeniso yenyanga kunye namava okurhweba (ulwazi oluceliweyo luya kwahluka kumrhwebi).
I-KYC (Yazi uMthengi wakho) luxanduva olusemthethweni ekufuneka lwenziwe ngabarhwebi abalawulwa ngaphambi kokuba uvunyelwe ukuvula iakhawunti.
Umthengisi we-STP uzakufuna ukuqinisekisa ukuba umthombo wakho wezezimali uvumelekile kwaye ungulowo uthi unguye. Ukuthetha ngokubanzi, kuyakufuneka uthumele umthengisi ikopi efundwe yencwadana yakho yokundwendwela okanye enye indlela eyamkelweyo yesazisi.
Amaxesha ngamaxesha umrhwebi unokufuna ubungqina obuncinci besazisi sakho, njengebhili yefowuni, into oyisebenzisayo, okanye nayiphi na enye ileta esemthethweni enegama lakho elipheleleyo nedilesi yekhaya.
Inyathelo lesine-Ukuqinisekiswa kweakhawunti
Rhoqo uya kufumana isiqinisekiso seakhawunti yakho entsha kwangoko.
Ukuba uziva ngathi ubulinde ixesha elithile okanye into ethile ayibonakali ilungile, sicebisa ukuba sinxibelelane neqela labathengi be-STP. Umrhwebi ngamnye uyahluka xa kuziwa kwindlela ezenziwa ngayo iinkqubo, kwaye ezinye zinokuthatha ixesha elide okanye zichaneke ngakumbi kunabanye.
Ukutsala umnxeba ngokukhawuleza okanye i-imeyile kwiqela lenkxaso yabathengi kuya kuhlala kukhokelela ekubeni isiqinisekiso sakho sigxothelwe wena ukuze ubeke ingqondo yakho ngokukhululeka.
Inyathelo lesihlanu - Qalisa
Okwangoku, kuya kufuneka usetelwe ukuba uqalise njengomrhwebi.
Ngoku kufuneka ungene kwiakhawunti yakho entsha ye-STP broker usebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Emva koko, konke okushiyekileyo kukukhetha ukhetho lwakho lokuhlawula kunye nokudiphozitha imali.
Kufanelekile ukuba ujonge ukuba ingaba ikhona na iakhawunti yedemo ye-STP yokuba uqhelisele kuyo ukuba unoloyiko oluncinci lokuhamba phambili.
I-5 yee-STP Brokers ezigqibeleleyo ze-2021
Awunakufumana iqonga elifanelekileyo lokurhweba le-STP elihlangabezana neemfuno zakho? Apha ngezantsi uyakufumana ukhetho lwee-5 ze-STP brokers ze2021!
1. I-Forex.com- Eyona ndlela ijikelezayo yokuthengisa kwi-STP
I-Forex.com ligama eligcina indlu kwindawo ye-forex. Inika iiakhawunti ze-ECN kunye ne-SPN, kwaye iidipozithi ezincinci ziqala kwi- $ 50 nje. Uya kuba nokufikelela ngaphezulu kwe-90 yezibini ze-forex, kunye neemfumba zeendlela zokuhlawula ezixhaswayo. Njengomthengisi ohloniphekileyo, iForex.com ilawulwa ngamalungu aliqela elinye.
Iqonga lokurhweba le-ECN eliphezulu.
$ 50 idiphozithi encinci
Ngaphezulu kwezibini ezingama-90 ze-forex ezixhaswayo
Amanye amaqonga e-ECN kwintengiso akhuphisana ngakumbi nemirhumo
2. I-FXTM- Best Broker STP yeeKhomishini zeZero
Umthengisi olawulwa kakhulu weFXTM unikezela ngeakhawunti epheleleyo ye-STP. Ngaphezulu kwe-forex, unokufikelela kwizitokhwe, isinyithi, amandla kunye nokunye. Uzakufuna ukuhlangabezana nedipozithi encinci ye- $ 500, ke le broker ye-STP ilunge kakhulu kwabo banebhloko enkulu yokuqala. Zombini i-MT4 kunye neMT5 ziyaxhaswa, kwaye awuyi kuhlawula naziphi na iikhomishini zorhwebo.
Imfumba yezixhobo zemali ziyaxhaswa
$ 500 idiphozithi encinci
3. Iimakethe zePepperstone- I-STP ye-Trading ehamba phambili yokuThengisa
Nokuba ujonge ukurhweba ngeZuluTrade, cTrader, okanye uthotho lweMT4 / 5 -Pepperstone uye wayigubungela. Okugqwesileyo konke, uya kuba nokufikelela kwi-akhawunti ye-STP yorhwebo ngokuchofoza iqhosha. Ungayifaka iakhawunti yakho kwangoko ngekhadi ledebhithi / lekhredithi. Imirhumo yokuthengisa, iikhomishini, kunye nokusasazeka kukhuphiswano kakhulu Pepperstone, kwaye umgaqo uthatha ngokungathí sina.
Imirhumo ephantsi kwaye isasazeka.
Iindlela zokuhlawula ezininzi ziyaxhaswa
Khetha kumaqonga amane ahlukeneyo orhwebo
Iindaba zexesha lokwenyani zisisiseko
4. Cinga iimakethi- Eyona STP Broker ilungileyo yokufumana iMilinganiselo ePhakamileyo
Ukuba ujonga umthengisi we-STP onikezela umda ophakamileyo wokuphakama, iiMarket zokuCinga zinokuba sesitratweni sakho. Ngobungakanani obufumanekayo ukuya kuthi ga kwi-1: 500, isigxina se- $ 100 sinokuvelisa ubungakanani beodolo eyi- $ 50,000. Iqonga liphethe iilayisensi ezininzi zenqanaba elinye, kubandakanya ne-FCA. Ubuncinci beedipozithi ziqala kwi- $ 500, onokuthi uyixhase ngedebit / ikhadi lekhredithi okanye i-e-wallet kwangoko.
Ndwendwela iiMarket zokuCinga
5. Robo Forex-STP Akhawunti nge-0 Ukusasazeka
Kwintshukumo engaqhelekanga, iRobo Forex ngumrhwebi okwi-Intanethi onika i-0 isasazeka. Ikwenza oku ngokusebenzisa iiakhawunti zayo ze-STP, ukuze ukwazi ukurhweba ngokwakha amaxabiso ekhokelela kumzi-mveliso. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, ungaqala ngeakhawunti ngedipozithi encinci ye- $ 10 nje.
Ubuncinci beediphozithi $ 10 kuphela
Ukukhawuleza ukusebenza ngokukhawuleza
Ngokuchasene engaziwayo kwimeko yomrhwebi
Tyelela iRobo Forex
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kukho imigaqo engqongqo kunye nemimiselo ekhoyo ekukhuseleni wena njengomrhwebi okanye umtyalomali, kwaye abathengisi be-STP abangcono baya kuba nelayisenisi epheleleyo ngenxa yeso sizathu.
Xa kuziwa kukhuseleko lweemali zakho zokurhweba kunye nokuthembela kumrhwebi wakho, emva koko iqonga elinelayisensi ngokupheleleyo libalulekile. Ngenxa yeso sizathu, asinakuze sicebise umthengisi we-STP (okanye naluphi na uhlobo) olungalawulwa ngokupheleleyo kukhuseleko lwakho.
Nangona kunjalo, esinye sezibonelelo eziphambili zokurhweba nomthengisi we-STP ngaphezulu komenzi wentengiso kukuba uyakwazi ukungena kwintengiso yokwenyani. Enkosi kubanikezeli bemali abaninzi ababonelela ngamaxabiso nge-STP broker yakho, unokufikelela kwiibhidi zentengiso ezinokhuphiswano ngakumbi. Ngaphezulu koku, iiodolo zakho zentengiso kunye nokuzalisa ziya kwenziwa ngesantya nangokuchaneka.
Soloko usenza uphando lwakho ngaphambi kokuzibophelela ngokupheleleyo, njengoko abathengisi bohlukile kwaye iimveliso kunye neenkonzo zabo ziya kwahluka ngokunjalo. Kukwacetyiswa ukuba mhlawumbi uqale ngokutyala imali encinci ngelixa ufumana iinyawo zakho.